नेपाली युवाले बनाए मोबाइलबाटै घरका सबै विद्युतीय सामान नियन्त्रण गर्न सकिने नौलो प्रविधि!
घरबाट हतार हतार गरेर निस्किँदा कहिलेकाहीँ बत्ती निभाउन बिर्सिन्छ। खोलिरहेको टिभी, पानीको मोटर वा हिटर पनि खुल्ला नै रहन सक्छ। बिच बाटोमा पुगेर झल्याँस्स सम्झिँदा के गरूँ के गरुँ हुन्छ। घर गए अफिस ढिलो हुने अनि अफिस गए दिनभरि घरमा बिजुलीको सत्यानाश। फेरि होस् न त भन्दा पनि आगलागी होला भन्ने पिर। यस्तो दुविधामा के गर्ने? अफिसमा बसिबसी घरका सबै सामानलाई नियन्त्रण गर्न पाए कस्तो सजिलो हुन्थ्यो?
घर फर्किने बेलामा पनि घर पुग्नुभन्दा पहिला नै एसि खुलिरहेको होस्। जुस मेकरले चिसो जुस बनाइदिइरहेको होस्। राती सुत्ने बेला बलिरहेको बत्ती निभाउनलाई उठ्नु नपरोस्। बेलाबेला यस्तो कल्पना पनि गर्छौँ नि हैन?
दैनिक जीवनमा परिरहने यस्ता घटनाहरू साना हुन् तर तिनमा सजिलो थपिए ठुलो फरक पर्छ। ग्राहकको यही कल्पनालाई आफ्नो व्यवसाय बनाइरहेको छ कनेक्ट होमले र नेपाली प्रविधि जगतमा नयाँ क्रान्ति गरिरहेका छन् आलोक सुवेदी र उनको टिमले।
“नेपालमै बनेको नेपालको लागि” भन्ने नारालाई लिएर उनीहरूले सुरु गरेको नवीन प्रविधि छोटो समयमा नै लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
यसको सुरुवातको कथा रोचक छ।
केही वर्ष अघि आलोक पढाइको सिलसिलामा अमेरिका गएका थिए। त्यहाँको ओक्लाहोमा, क्यालिफोर्निया र सिलिकन भ्याली जस्ता ठाउँहरूमा अध्ययन गर्ने र सीप सिक्ने मौका पाए। बिजनेस र आइटिको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू सिके। आफूले सिकेको सीपलाई नेपालमा भित्राउने र यहाँका युवाहरूलाई पनि सिकाउने सोच आएपछि पढाइ सकाएर आफ्नो टिमसँग सरसल्लाह गरे। देशमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने र रोजगारीको सृजना गर्ने उदेश्यमा सबै जना सहमत भएर नेपाल फर्किए।
काठमाडौँको घट्टेकुलोमा उद्यमशाला भवन निर्माण गरेसँगै सोचले मूर्त रूप पाउन थाल्यो। "भिजिल टेक्नोलोजी एन्ड अनलाइन होम सर्भिस प्रा.लि." को स्थापना गरी उनीहरूले काम सुरु गरे। हाल त्यस कम्पनीले प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै काम गर्छ। कनेक्ट होम ती मध्येको एक हो।
यो एक स्मार्ट होम सोलुसन हो जसमार्फत घरका सारा विद्युतीय उपकरणहरूलाई फोन अथवा आफ्नो आवाजबाट सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
उनीहरूले यो प्रविधि हतारमा सुरु गरिहालेका भने हैनन्। यसलाई भित्राउनु भन्दा पहिला धेरै अनुसन्धान गरेका थिए। सुरुमा यो महँगो थियो। आम नेपालीको पहुँचमानै थिएन। आवश्यक सामानहरू नेपालमा नपाइने र चीनबाट मगाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई जडान गर्न महँगो पर्थ्यो। उनीहरू त्यो अवस्थालाई हटाउन चाहन्थे। नेपालीले किन्न सक्ने प्रविधि बनाउन चाहन्थे।
कनेक्ट होमलाई कसरी सस्तो र सुलभ बनाउने र आम नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने कुराको समाधानमा उनीहरू लागे। टिमसँग मिलेर छलफल गरी नयाँ खाका निर्माण गरे। पहिलो परीक्षण आलोकको आफ्नै घरबाट सुरु भयो। प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै समस्या भेटिएन। बिस्तारै साथीभाइका घरहरूमा पनि जडान गरियो। त्यहाँ पनि समस्या आएन। उनीहरूलाई हिम्मत आयो। तत्कालै मार्केटिङमा जुटे। अहिले यो सुविधा ९ वटा घरहरूले पूर्ण रूपमा जडान गरिसकेका छन्। अन्य हाउजिङ कम्पनी तथा घरहरूबाट पनि माग आइरहेको छ।
आलोक भन्छन् " स्मार्ट होम सोलुसन सुन्नासाथ महँगो हुन्छ भन्नेहरू अहिले हाम्रो सेवातिर तानिन थालेका छन्। हामीलेदक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सस्तो स्मार्ट होम सोलुसन बेचिरहेका छौँ। "
२ तल्ले घरका लागि पूर्ण जडान केवल रु. ३०,००० मै गर्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू धेरै छन्। सबै स्विचहरूलाई एकै ठाउँमा फोन, गुगल होम, एलेक्जा जस्ता आवाज नियन्त्रण गर्ने डिभाइस मार्फत कनेक्ट गर्न सकिन्छ। बाहिरबाटै सजिलैसँग हुने भएकाले यसलाई जडान गर्ने समयमा घरमा रहेका कुनै पनि स्विचहरू परिवर्तन गर्नु पर्दैन। साथै स्विच अनअफ मात्र गर्ने नभई यसमार्फत घरमा विद्युतीय सामाग्री प्रयोग गरेर गरिने काम सेड्युल पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै: ठिक दुई बजे ट्याङ्कीमा पानी भर्नु छ भने उक्त काम यसकै सहायताले गर्न सकिन्छ। यसले राती उठेर पानी भर्नुपर्ने झन्झटलाई पनि टार्छ। राति ८ बजे टिभीमा कुनै मनपर्ने कार्यक्रम आउँदै छ भने त्यसलाई सम्झाउन पनि सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक ८ बजे टि.भी स्वतः अन हुन्छ। त्यसै गरी यसको अर्को फाइदा भनेको हरेक विद्युतीय सामानले कति बिजुली खपत गरिरहेको छ भनी सजिलै हेर्न सकिन्छ। यसो हुँदा कुन सामानले कति विद्युत् खपत गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ र सोही अनुसार आफूले विद्युतीय सामानको अनावश्यक प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ।
यसलाई जडान गर्न मात्र नभई चलाउन पनि सजिलो छ। साधारण रूपमा फेसबुक चलाउन सक्ने व्यक्तिले यसलाई सजिलै चलाउन सक्छन्। यस विषयमा अझ रोचक जानकारी थप्दै आलोक भन्छन् "यस एपमार्फत आफ्ना सामानहरूको नाम पनि राख्न मिल्छ।"
जडान गरेको २ वर्षभित्र कुनै समस्या देखिएमा नि:शुल्क रूपमा मर्मत गरिदिने व्यवस्था पनि कम्पनीले गरेको छ। अहिले भएको प्रविधिलाई पनि समयक्रमसँगै अझै परिष्कृत बनाउँदै लैजाने उनीहरूको योजना रहेको छ।
देशमा भएका विविध समस्याको बावजुत पनि समाधानको लागि नवीन प्रविधि खोज्ने आलोक र उनीहरूको टिमको प्रयास साँच्चै प्रभावकारी छ। आफूले विदेशबाट सिकेका कुराहरूलाई नेपालमा लागु गर्ने सम्भावना छ भनेर उनीहरूले अरूलाई पनि बाटो देखाएका छन्। आलोक भन्छन् ‘विदेशमा समयको कदर गर्न, पैसाको सदुपयोग गर्न तथा अनुशासित हुन सिकियो, त्यही कुरालाई बोकेर नेपाल आउने हो भनेँ पनि यहाँ मेहनत गर्नको लागि धेरै ठाउँ छन्।’
उद्यमी नेपाल टिम उनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छ।
नोट: यो लेख उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा अन्तर्गत तयार पारिएको हो। उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा लिइदिनु भएकोमा भिजील टेक्नोलोजी एण्ड अनलाइन होम प्रा.लि. लाई विशेष धन्यवाद।
भिजील टेक्नोलोजी एण्ड अनलाइन होम प्रा.लि. सँग सम्पर्क गर्नु परेमा दिइएको नम्बर डायल गर्नुहोस्: ०१-४४४२६५४